Yolanthe Cabau sy ny andiam-paritry ny polisy, ny famokarana John de Mol tsara tarehy (toa ny vaovao ANP): Martin Vrijland
Nanelingelina ahy nandritra ny fotoana kelikely ny fanontaniana: John de Mol no scammer lehibe indrindra any Holandy? John de Mol dia tompon'ny ANP, Jeneraly Dutch Press Office ary koa an'ny Talpa Network, ka manomboka manontany tena ianao raha tsy afaka mampiasa fomba mitovy amin'ny famoahana vaovao sandoka rehefa mampiasa andian-dahatsoratra ho an'ny polisy izy DNA mamokatra. Yolanthe Cabau dia afaka mitana andraikitra lehibe ao amin'ity andiam-piaramanidina vaovao marika polisy ity izay toa mifanaraka amin'ny tanjona fampielezan-kevitra tadiavina rehetra.
Nandritra ny taona maro aho dia nanoratra fa ny ADN dia ampiasaina ho toy ny teny majika mba hamoronana fahatsapana fa afaka mampiasa azy ianao hamahana ny raharaha famonoana olona, ​​fa io fampiasan-kevitra io dia natao tamina mangingina mba ahafahana mametraka ny angon-drakitra nasionaly mba ho avy tsy ho ela (ankoatra ny zavatra hafa) fanodinam-pananana mety ho tonga amin'ny alàlan'ny tambajotra 5G ny mponina (jereo eto). Izany no antony mahatonga ny fampielezan-kevitra manodidina ny 'ADN ho toy ny fitaovana majika' dia tokony hampitomboina amin'ny haingam-pandeha lehibe toy izany. Andian-dahatsoratra izay manome fahatsapana fa afaka mamaha ny trangan'ny famonoana ny ADN dia toa fampielezankevitra ihany, ohatra, ny raharaha Jos Brech, izay tampoka taorian'ny ADN 20 taona maro dia hita tany amin'ireo mpanampy an'i Nicky Verstappen. Ny teny hoe DNA dia tsy maintsy apetraka ao an-tsainao ao an-tsaina ary inona no mety ho tsara kokoa noho ny mampiasa asterisk toa an'i Yolanthe ho an'izany? Ny fitadiavana ny ADN dia tsy manaporofo na inona na inona ary rehefa ao anaty tranokala ao ny ADN, dia afaka mampihatra ny ADN amin'ny sehatry ny heloka bevava ihany koa ny fahamarinana, mba hanafenana anao. Azonao atao adika mora foana ao amin'ny laboratoara ny ADN (jereo eto).
Fanontaniana iray hafa apetrako indraindray ny tenako: Tena afaka nahazo vola an-tapitrisany tamin'ny famokarana fahitalavitra irery ve i John de Mol sa nanana ny fianakavian'i de Mol nitana andraikitra lehibe tamin'ny famoahana vaovao diso nandritra ny taona maro? Na izany aza, manana fomba azo atao rehetra izy ireo amin'ny alàlan'izy ireo, noho izany dia toa tsy ho vita ny mahavita mamono olona an-keriny an'i Heineken. Peter R. de Vries ao amin'ny anjara toerana nitondrana ho "mpanao gazety mpanao heloka bevava" sy ireo namana Cor van Hout, Willem Holleeder, Frans Meijer ary Jan Boellaard izay mpisehatra ihany koa.
Mino ve ianao fa ny fitsapana farany nataon'i Willem Holleeder farany tamin'ny rahavaviny Astrid ho mpilalao sarimihetsika vaovao eny amin'ny habakabaka dia nitodika nanodidina ny vono olona mahatsiravina natao? Ahoana raha tsy savony daholo izany ary dia voafitaka ianao. Moa ve i Holleeder tsy nanao fandraisana anjara lehibe tamin'ny dingana fampisehoana lehibe izay novaina ara-dalàna ny teny hoe 'vavahadin'ny satroboninahitra »? Fantatrao ve ny dikan'izany? Izao no lazain'ny teny rehetra. Navela hanambara izany fijoroana ho vavolombelona izany na dia mijanona tsy mitonona anarana aza.
Tsy hahagaga ahy raha ny fianakavian'i de Mol dia nahazo ny volany indrindra tamin'ny famokarana vaovao sandoka naloaky ny varotra hetra ary i Peter R. de Vries no mpanolotra PsyOp (asa psikolojia) izay afaka mamono azy ho an'ny vahoaka. Tsy hahagaga ahy koa fa ny zavatra maro izay lehibe tamin'ny haino aman-jery dia famoahana vaovao sandoka fotsiny. Farany, ny fomba rehetra dia misy ao amin'ny studio nataon'i John de Mol (ary am-polony taona maro).
Hafahafa ve raha milaza aho fa tsy nino ny nalaina an-keriny an'i Freddy Heineken sy i Ab Doderer? Izany ve tsy nametraka ny marika Heineken tamin'ny sarintany maneran-tany? Mety tsy nisy marketing tsara kokoa angamba. Ny sehatra antsoina hoe Amsterdam Mafia manontolo dia tsy nisy akory araka ny hevitro. Mety ho tantaram-pitiavana tsotra fotsiny ry zareo amin'ny konteks 'Olana, fihetsika, vahaolana. Mila lava-bato kely vitsivitsy foana ianao hahafahanao mampihatra ny satan'ny polisy bebe kokoa. Ny zavatra rehetra fantatsika dia avy amin'ny haino aman-jery. Fantatrao, avy amin'ny masoivoho mpanao gazety toa an'io avy amin'i John de Mol. Ary mazava ho azy dia misy ny boky momba ny voasoratra sy ny filma na ny famokarana teatra momba azy. Sa efa namokatra TV foana izy ireo ary efa misy teatra ve ry zareo?
Ny dingana Holleeder, ohatra, dia naneho ny fomba fiasan'ny fitsarana amin'ny haino aman-jery ary ahoana ny ilana porofo (na tsia marina) tsia amin'ny fanenjehana. Ny fampidirana sy tombo-kase mifamatotra mifototra amin'ny vavolombelona satroboninahitra sy ny famadihana ny ankohonany (raha tsy misy porofo an-javaboary mafy) dia mamorona ny efitrano ho an'ny rafi-pitsaràna mba hahafahan'ny olona any ambadiky ny fisotroana. Ny Justice dia tokony hiteny fotsiny hoe manana vavolombelona satroboninahitra tsy fantatra anarana na fahamarinana fotsiny dia tsy maintsy mino ny tantaran'ny rahavavy iray ary feno ny fandresen-dahatra. Willem Holleeder sy Peter R. de Vries dia nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fanatanterahana ny lalàna vaovao sy ny lalàna momba izany. Moa ve ny dingana Holleeder ve izany dingana efa nieren-drivotra efa niely hatrizay? Izay no zatra azy ary azo antoka koa fa lasa nino ny sarin'ny 'zazalahy mavesatra' isika. Inona no nolazain'i Joseph Goebbels? "Raha mandainga lehibe ianao ary averinao matetika izany dia hino izany ny rehetra".
Na izany aza, ohatra, dia tsy mino na inona na inona momba ny fanafihana ny mpanakanto Rob Scholte, (araka ny loharanom-baovao tsy fantatra anarana) no nahazo alàlana an-tongotra vokatry ny aretina taoriana kelin'ny nanaovana izany fanafihana izany. Mety efa nampiasaina tamin'ity fotoana ity ve izy io? Ahoana ny fomba hipoahan'ny baomba iray fiara ary mety ho potipotika ny tongotr'i Scholte raha "ny sakaizany" Micky Hoogendijk (izay nipetraka teo amin'ny sezin'ny mpiara-mpamily) dia nitsoaka tsy nisy fikapohana (nefa vetaveta dia nahazo ny zaza)?
Raha avelanao hilentika ao io dia toa tantara tena tsy mampino be mihitsy indraindray. Na izany aza, dia manintona ny saintsika izy ireo, satria ny mpamaky vaovaon'ny NOS no milaza izany amin'ny akanjo milamina ary satria mahita sary miaraka aminy ianao. Fa eny, John de Mol manana fakantsary, olona ary loharano ampy hanangonana zavatra.
Peter R. de Vries dia manana ny anjara toerany hatrany rehefa misy tranga famonoana lehibe. Izy ilay lehilahy namaha ny raharaha famonoana an'i Marianne Vaatstra miaraka amin'ny ADN majika. Izy ilay lehilahy nanafika ny raharaha Nicky Verstappen tao anatiny tamin'ny olona (miaraka amin'ny ADN majika). Izy tokoa no lehilahy ao ambadik'ireny tranga rehetra ireny (PsyOp?) Tranga: avy amin'i Anne Faber hatramin'ny raharaha Romy sy Savannah ary ny vokatra (DNA) rehetra azontsika arahin'ny haino aman-jery. Antsoiko hoe vokatra izany, satria ny ankamaroan'ny vaovao dia avy amin'ny masoivohom-baovao iray izay tompon'antoka amina miliara sy mpamokatra fahitalavitra John de Mol. Iza avy eo no milaza amintsika amin'ny 100% azo antoka fa afaka atokisantsika ireo tantara rehetra ireo? Iza no milaza amintsika fa tsy nitory vaovao tsy marina nandritra ny taona maro isika? Ah, andraso! Hanambara aminao ny haino aman-jery. Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek, Jeroen Pauw ary mpanamboatra hevitra maro hafa. Rehefa dinihina tokoa, dia manao ny heviny ianao. "Matokia anay fa avy any Rosia daholo ny vaovao sandoka"
Hitako mahafinaritra mahafinaritra i Willem Holleeder, miaraka amin'i Cor van Hout, Willem Endstra ary Theo van Gogh amin'ny nosy Waikiki. Mihevitra izahay fa fantatsika ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao, satria ny tontolon'ny fahitanay dia loko tanteraka amin'ny gazety, radio ary TV. Ny fifanakalozan-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialy dia arovan'ny tafika amin'ny fomba fijerin'ny mpitondra, izay tokony hitarika ny fifanakalozan-kevitra amin'ny lalana tiana. Ny mombamomba ny hosoka lalina (anisan'izany ny tambajotra sosialy azo itokisana) dia azo apetraka mora foana amin'izany. Tsy mahalala na inona na inona mihitsy isika. Mihevitra isika fa fantatsika, saingy ny fisainana dia nitafy vondron'olona vitsy izay miandraikitra ny haino aman-jery sy ny media sosialy. Ilay sarimihetsika 'Ampio ilay alika'lalaon'ny ankizy raha ampitahaina amin'izay hitantsika isan'andro.
Lisitry ny rohy loharano: parool.nl, imdb.com, ontvoeringheineken.nl
Tags: ANP, ADN, Featured, Freddy Heineken, john de mol, vaovao diso, Nicky Hoogendijk, birao an-gazety, Peter R. de Vries, Rob Scholte, Willem Holleeder, Yolanthe Cabau
28 Aogositra 2019 ao amin'ny 15: 23
Sombiny indray! Misaotra!
Mazava ho azy fa ity…. Tsy fantatro akory fa i de Mol dia efa tompon'ny ANP.
Amin'ny fikarohana nataoko manokana ny Ask the Noses, fantatro taorian'ny fisolokiana marobe fa ity klioba ity no ao ambadiky ny zava-drehetra. Heineken, ohatra, dia ankoatra ny fisolokiana amin'ny dadaben'i Petersen, avy amin'ny ilàn'ny reniny Carla Breitenstein, manontany ny nazi.
Tsara ianao mety mieritreritra, sao, yuck, ahoana ny fahanginana. Raha tsy ho ahy, dia niafara matetika tamin'ny fifandraisan'ireto fifandraisana ireto aho rehefa tonga ny maizina sy mahatsiravina izay tsy mahatanty ny hazavana, fa tsy maintsy atao izany.
Heineken dia ao anaty boky mainty an'i Epstein koa ... ka tonga tany amin'ny nosy koa izy ..
Ny mpiasan'ny polisy Klaas Wilting dia mazava ho azy fa manontany ny orona. Mila manana ianao, satria tsy matoky olona amin'ireto karazana lainga ireto ianao, afa-tsy ny klioba matanjaka indrindra izay fantatry izao tontolo izao.
Holleeder dia efa fantatra ho an'ny orony.
Talpa manana ny sarin'ny hazo Kabbalah; ny boky mpamosavy talmudika feno fanodikodinana izay mamihina tanteraka ity fikambanana ity. Azonao atao ny miantso azy ireo hoe "Luciferians," "Cabal," na Sabbateans.
Antsoiko hoe "firavaka sandoka" izy ireo. Tonga dia miala amin'ilay fikosehana manohitra ny Semitism izay nampiharany azy.
Manana orona koa i Dadabe de Mol. Fa i Linda sy John toa an'i Bil Gates dia mety "efa nanavao" azy; miainga kely izy io.
Mahatsiravina ny fanaon'ity fikambanana ity ka tsy azonao ampandrenesina izany.
Tamin'ny fikarohana nataoko dia nahita ireto anarana rehetra ireto aho:
Epstein no bitroire an'ny Askhenazies.
Trotzky, Lenin, Stalin, Marx, Yeltsin, Putin, Bush, Clinton-Rodham, Obama (reny), Trump (jaja), Melanie, Netanyahu, Antony Weiner, Weinstein, Durtoux-case, Mossad, Issis, Cia, Mike Pompeo, Rothschilds, Hitler, Papa Francis, Zorreguieta, Windsors, Churchill, Beatrix ary ny 'Alfred Henry (Freddy) Heineken', ny reniny dia anontanio. koa, Carla Breinstein, Soros
Einstein, Darwin, Steven Spielberg, Bill Gates, Glenn Close, Kissinger, Start, Murdock, Dick Cheney, JP Morgan, Mussolini, Buzz Aldrin (Nasa fitondra-tanin-tsambo fanao any Nasa).
Trudeau, Aldous Huxley, Charles ary Jared Kushner, Jacky Kennedy, fianakavian'i Appelbaum. (Iza no namerina nanoratra indray ny tantara Bolshevik diso taorian'ny namonoany an'i Solshenytsyn), Darwin, Queen Elizabeth, Al Gore,
Maxwell (Robert an'ny 'fitaratra', ary Gishlaine), Zimbardo (fanandramana diso any amin'ny alahelo), Fam. Kravis, tompon'ny Macron sy Bilderberg, mpanamory 5G (FDA) Brad Gillen, Richard Branson, Boris Johnson, Mey, Thatcher, Sarkozy, Rockefellers, Julie Gerberding (CEO Merck), Robert Gallo namorona ny Aids,
Mpanao politika ao Holandy; Cohen, Asscher, Kok, Klaver, van Agt, Timmermans, Deijsselbloem, Schippers, Demmink, Hiddema, Peter R. de Vries, Juan Guaido (Venezoela) Jair Bolsonaro (Brasil), Zorreguieta (rain'i M.), Victoria Nuland (Kagan fianakaviana, rava an'i Ukraine), Timmermans, Juncker (EU) Nixon, Rockefeller, ny Bolsheviks ... sns sns.
Raha tsorina dia ampy mba tena manahy. Sarotra be ny mampisy fanamarinana ny rehetra; mahomby amin'ny farany. Fa izy ireo dia tompony amin'ny fahaizana manodinkodina.
Tao anatin'ny Talpa dia nahita an'i Gordon, Albert Verlinde, Tale Jeneralin'ny Peter de Mönnink, Jan Versteeghe sns sns ary tsy ela i Lil Kleine, izay niantso ny zanany vavy hoe "Ziona".
Ny fahitana manokana dia i Cor van Hout sy i Theo van Gogh samy manana ny loha mitovy. Ary azo antoka fa manana 'ny orona' indray i Theo. Rob Scholten koa. Mazava be amiko fa misy "fanahy" ao ambadiky ny fitambaran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao.
May ny ala. Fa mahafinaritra. Tokony ho tonga hazavana izany.
28 Aogositra 2019 ao amin'ny 17: 08
Misaotra anao Vrijland, saingy aza mieritreritra fa fady io, hitan'ny rehetra fa lavitra
Ny fikafika an'i Rob Scholte dia manana fofonaina vaovao, fa ny mpisehatra sasany kosa dia tsy maintsy nokaramain'ny fanjakana. Ny kintana an-dRamatoa Scholte tenany, fiaraha-miasa amin'ny herinaratra sy ny filalaovana ilay alika masiaka any ivelany satria ny fahefana (fanjakana) ihany, inona izany karazana izany?
Ny tafatafa izay nasehon-dramatoa Scholte tao amin'ny tranokalany manokana avy amin'ny Bar dia tsy dia mifanentana aminy ihany koa, tsy misy ifandraisany amin'ny tombontsoam-bahoaka izy .... fa ny mpanao heloka kosa dia mandehandeha fotsiny….
Mazava ho azy fa tsy ny olona rehetra no manao loko mandoko toa ny Royal House tahaka izany, avy eo ny azy io.
Ary ahoana ny anjara toeran'i Micky Hoogendijk? manosika ny fandaharan'asan'ny transgender izy amin'ny alàlan'ny sary, miara-mianjera miaraka amin'ity fomba ity ny sombin-lalao.
Ny haino aman-jery dia manome antoka fa ny olona tena mitsikera toa an'i Martin Vrijland dia tsy omem-boninahitra amin'ny gazety na amin'ny fahitalavitra, i De Mol dia mijanona ho Mol, fiaviana ihany! ? Volomparasy navaivay
30 Aogositra 2019 ao amin'ny 12: 15
Somary vitsy amin'ireto fiampangana ireto ny mampiahiahy.
1 Ny fakana an-keriny an'i Heineken dia fangalarana an-keriny ary efa nihetsika, tsy mbola nisy izany
2: Tsy nanana baomba (grenade tanana) i Rob Scholte teo ambany seza, wow!
ary: 3 mazava ho azy fa ny atidoha mikotrika ny TV TV manohitra ireo olona mampiasa ... kintan'ny
Ary tsy misy olona manome fanehoan-kevitra, tsy avy amin'ny antoko Heineken sy Rob Scholte ve? dia saika hieritreritra ianao fa tsy afaka hiahiahy intsony.
« Inona no marina ny fanafihana amin'ny fahafatesana vokatry ny pedophile any Assen?
TOROHEVO: ny rejuvenation pill dia zava-misy! 80 Ny lehilahy iray taona dia nitelina voalohany taorian'ny fitsapana biby »
Total visits: 263.075
Martin Vrijland op Inona no ao anatin'ny fitsapana 22 herinandro ary azo atao ve ny manova ny fitovian'ny lahy sy ny vavy?
Zandi Eyes op Inona no ao anatin'ny fitsapana 22 herinandro ary azo atao ve ny manova ny fitovian'ny lahy sy ny vavy?
Zonnetje op Moa ve ny IVF sy ny vaksiny dia nitarika ny taranaka bisikila?